Kedu ihe mgbaàmà nke ọrịa Cyclospora? - Ibi ndụ ahụike 2022
Kedu ihe mgbaàmà nke ọrịa Cyclospora?
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ntiwapụ nke cyclospora na-arị elu. Cyclospora, nje nje na-adịghị ahụkebe, nwere ike imerụ sistemu eriri afọ mmadụ. Dị ka Mahadum Minnesota's Center for Disease Research and Policy si kwuo, ngụkọta nke ntiwapụ a bụ 373 na steeti 15 n'ofe United States.
Ebu ụzọ mara erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) maka ntiwapụ nke cyclospora na June 28, 2013 site n'aka mmadụ abụọ bi na Iowa. N'oge ahụ, CDC malitere nyocha ebe nje nje ahụ si malite wee chọpụta na ọ bụghị njem mba ụwa kpatara ya. Agbanyeghị, achọpụtabeghị ebe ọ bụ kpọmkwem.
Onye mere parasaiti a? Ngwakọta ọhụrụ na salad ekpokọtara. Dị ka ụlọ ọgwụ Mayo si kwuo, mmadụ nwekwara ike bute nje ahụ site n'ịṅụ mmiri ma ọ bụ iri nri nke onye ọzọ meruworo. Cyclospora dị iche karịa ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ sitere na nri n'ihi na ọ naghị apụta ruo ụbọchị ma ọ bụ izu mgbe ọrịa gasịrị.
"Enweghị mgbasa ozi n'otu n'otu. … Ọ ga-agaferịrị site na onye ọbịa, na-abụkarị nri emetọọ," Dr. Edward Dominguez, onye dibịa na Methodist Medical Center na Dallas, kwuru na akụkọ NBC.
Mgbe ụfọdụ, mgbaàmà ndị a agaghị apụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu, ma ọ bụrụ na a naghị agwọ ya, ha nwere ike ịdịru site na ụbọchị ole na ole ruo otu ọnwa. Ụfọdụ ndị nwere nje nje ahụ anaghị egosi na ha bu ọrịa.
CDC na-achọpụta akara ngosi ndị a:
1. Ọgbụgbọ mmiri, na-enwe ugboro ugboro, mgbe ụfọdụ ihe mgbawa, eriri afọ.
2. Enweghị agụụ
3. Mbelata ibu
4. Ihe mgbu / mgbu
6. Ịba ụba gas
7. Ọgbụgbọ na ike ọgwụgwụ
8. Agbọ agbọ
9. Ahụ mgbu
10. Isi ọwụwa, ahụ ọkụ na ihe mgbaàmà ndị ọzọ yiri flu
Nanị ụzọ isi chọpụta n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na mgbaàmà mmadụ nwere bụ n'ezie cyclospora bụ site na anụ ahụ ya ma ọ bụ onye nlekọta ahụike ndị ọzọ na-ewere ihe nlele stool. Ọgwụgwọ maka ọrịa cyclospora bụ ọgwụ nje jikọtara ọnụ nke a maara dị ka trimethoprim-sulfamethoxazole, nke aha azụmaahịa mara Bactrim ma ọ bụ Septra. Maka ndị nwere ihe nfụkasị sulfate, Cipro ma ọ bụ Alinia bụkwa nhọrọ ọzọ enwere ike.
Otú ọ dị, dị ka Ngalaba Na-ahụ Maka Ahụ Ike na Nchekwa gburugburu ebe obibi South Carolina si kwuo, "ọtụtụ ndị nwere usoro ahụike ahụike ga-agbake n'enweghị ọgwụgwọ."
O doro anya na mgbochi dị mma karịa ịnara ọgwụgwọ, yabụ ndị dọkịta na-atụ aro ka ndị na-azụ ahịa kpachara anya mgbe ha na-asa ihe ha na-emepụta. Ịsacha mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri gị na ngwakọta ngwaahịa akwakọbarịrị ma ọ bụ iji mmanya na mmiri dị ka ịsacha ụlọ nwere ike inye aka belata ohere nje nje na-ebute nri gị.